Nuxurka nimcada, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Mararka qaar waxaan maqlaa walaacyo aan culeys badan saarayno xagga nimcada. Sida sixitaanka lagu taliyay, ka dib waxaa lagu doodi karaa, inaynu miisaan culus u nahay barista nimcada, waxaan tixgelin karnaa in addeecid, cadaalad, iyo waajibaadka kale ee lagu sheegay Qorniinka, iyo gaar ahaan Axdiga Cusub. Kuwa ka walaacsan "nimco badan" ayaa leh walaac sharci ah. Nasiib darrose, qaar ayaa baray in sida aan u nool nahay aan muhiim aheyn haddii aan ku badbaadi lahayn nimco halkii aan ka shaqeyn lahayn. Iyaga, nimcadu waxay la mid tahay iyadoo aan la aqoonin ballanqaadyo, qawaaniin, ama qaab dhismeedka la rajeynayo. Iyaga, nimcadu waxay ka dhigan tahay in wax aad u qurux badan la aqbalo, maadaama wax walba horay loo sii cafiyey. Marka loo eego fikradan qaldan, nimcadu waa tigidh bilaash ah - ilaa xad xoogaa maran oo qareen ah oo awood u leh inaad ku kacdo waxaad rabto.
Antinomism-ka waa nooc ka mid ah nolosha faafinaysa nolol la'aan ama ka soo horjeedda wax sharci ama qawaaniin ah. Taariikhda kaniisadda oo dhan, dhibaatadan waxay ahayd mawduuca Qorniinka iyo wacdinta. Dietrich Bonhoeffer, oo shahiid u ahaa nidaamkii Nazi, wuxuu ka hadlay "nimco raqiis ah" oo ku jirta buugiisa Succession. Antinomism waxaa looga hadlay Axdiga Cusub dhexdiisa. Jawaabtiisii, Bawlos wuxuu tixraacay eedaynta ah in xoogga la saaray nimcada uu dadka ku dhiirrigelinayo inay "ku sii adkaystaan ​​dembiga si nimcadu u sii adkaato" (Rooma 6,1). Jawaabta rasuulku wuxuu ahaa mid gaagaaban oo adkeyn kara: "Ka dheerow!" (V.2). Dhowr jumladood kadib wuxuu ku celceliyey eedeymaha isaga ka dhanka ah wuxuuna ku jawaabey: «sidee hadda? Waxaynu ku dembaabnaa sharciga maxaa yeelay, waxaynu ku hoos jirnaa nimco, sharciga ka hooseeya. Taasi waa fogaan! » (V.15).
Jawaabta rasuul Bawlos ee ku saabsan eedeynta anti-nomism way cadahay. Qof kasta oo ku dooda in nimcadu ka dhigan tahay in wax walba la oggol yahay maxaa yeelay waxa iimaankiisa daboolay waa khalad. Laakiin waa maxay sababta? Maxaa qalad ku galay halkaas? Dhibaatadu dhab ahaantii waa "naxariis badan"? Xalkiisuse miyuu runtii ka kooban yahay isbarbar dhigidda nimcadan?
Waa maxay dhibaatada dhabta ahi?
Dhibaatada dhabta ahi waa aaminsanaanta in nimcadu ka dhigan tahay in Ilaah ka reebban yahay sharciga, amarka, ama waajibka. Haddii nimcadu run ahaantii macnaheedu tahay bixinta sharci ka reebis, haa, nimco badan waxaa jiri kara waxyaalo badan oo laga reebayo. Hadana hadii la yidhaa naxariis Eebbe, waxaan ka filan karnaa inuu ka dhaafo waajibaadka ama hawl kasta oo aan qabano. Inta badan nimcadu waa ka reebantahay addeecidda. Iyo naxariis ka yar, marka laga reebo kuwa yar, heshiis yar oo fiican.
Nidaamkan oo kale ayaa laga yaabaa inuu si fiican u sharraxo waxa nimcada aadamuhu sida ugu fiican u qaban karto. Laakiin ha iloobin in qaabkani yahay mid lagu qiyaaso nimco addeecitaan leh. Wuxuu ka dhigayaa labada dhinac midba midka kale inuu ka hor tago, taas oo dhalisay dagaalo joogto ah oo dib-u-dhac iyo dagaalba ah oo aan waligiis nasin, maxaa yeelay labadooduba dagaal bay ku jiraan. Labada dhinacba waxay iska indho tiraan guusha midba midka kale uu gaaro. Nasiib wanaagse, qorshaha noocan ahi kama tarjumayo nimcadii Eebbe. Runta ku saabsan nimcada ayaa inaga xoreysa dhibaatadan beenta ah.
Nimco Eebbe shaqsi ahaan
Sidee Baybalku u qeexaa nimcada? “Ciise Masiix laftiisu wuxuu u taagan yahay nimcada Ilaah ee inoogu jirta”. Barakadii Bawlos ee dhammaadka warqaddii labaad ee uu u qoray kuwa reer Korintiis waxay tilmaamaysaa “nimcada Rabbigeenna Ciise Masiix”. Nimcadu waxay ina siisaa rabitaan xor ah qaabkiisa uu ku dhashay wiilkiisa, kaas oo si kalgacal leh naxariistiisa ugu gudbiya jacaylka Ilaah ee uu inala yeelo Allaha awooda leh. Waxa Ciise noo sameeyo wuxuu noo muujinayaa nooca iyo dabeecada Aabaha iyo Ruuxa Quduuska ah. Qorniinku wuxuu inoo sheegayaa in Ciise yahay muujinta aaminka ah ee dabeecadda Eebbe (Cibraaniyada 1,3 Elberfeld Bible). Halkaas waxaa laga leeyahay, "Isagu waa suuraddii Ilaaha aan la arki karin" oo waxay ahayd "Ilaah waa ka farxay in faro badan oo isaga ku dhex jira" (Kolosay 1,15:19;). Ku alla kii isaga arka wuxuu arki doonaa aabaha, oo haddaan isaga garanno, isaguna waannu ku garan doonnaa aabbaha (Yooxanaa 14,9:7;).
Ciise wuxuu sharraxayaa inuu kaliya sameeyo "wuxuu arko Aabbuhu samaynayo" (Yooxanaa 5,19). Wuxuu na soo ogeysiinayaa in kaliya uu yaqaan aabaha iyo keli kaligiis uu u muujiyo (Matayos 11,27). Yooxanaa wuxuu inoo sheegayaa in Ereyga Ilaah, oo tan iyo bilowgii Ilaah la jiray, uu qaatay qaab bini aadam ah oo "wuxuu ina siiyay sharaf ay tahay inuu yahay wiilka keliya ee Aabbaha," ee nimco iyo run ka buuxa. Intii sharciga la siiyay Muuse. nimco iyo run [...] wuxuu ku yimid xagga Ciise Masiix. » Runtii, "dhammaanteen waxaynu buuxnaantiisa ka helnay nimco ka nimco." Oo wiilkiisii, oo ku jiray qalbiga Ilaah weligiis, ayaa isaga noo sheegay " (Yooxanaa 1,14-18).
Ciise wuxuu nagu duceeyey nimcadii Eebbe ee noo ahayd - xagga hadalka iyo camalkuna wuxuu muujinayaa in Ilaah qudhiisa nimco ka buuxo. Isagu waa nimco naftiisa. Isagaa iyaga ina siiya jiritaankiisa - midka aan ku kulanno Ciise. Waxa uu ina siiyaa ma aha ku tiirsanaanta kaliya naguma aha ama wax kasta oo waajib ah oo na saaran inuu na siiyo faa'iidooyinka. Ilaah nimcadiisa wuu ku deeqeyaa maxaa yeelay deeqsi ahaantiisa aawadeed, taasi waa, inuu si xor ah innaga siiya Ciise Masiix. Waraaq uu u diray reer Rooma, Bawlos wuxuu ugu yeedhay nimcada hadiyad deeqsinimo leh oo xagga Ilaah ka timid (5,15-17; 6,23). Waraaq uu u diray Efesos, wuxuu ku dhawaaqay ereyo xusuus ah: "nimcadiina waxaad ku badbaaddeen rumaysad, mana aha xaggaaga: waa hadiyadda Eebbe, ee ma aha xagga shuqullada, si qofna u faani karin" (2,8-9).
Wax kasta oo Eebbe ina siiya, wuxuu si deeqsinimo ah inaga siiyaa naxariis, ka rabitaan qalbi leh oo wanaag ku sameeyo wax kasta oo isaga kaga duwan. Ficilladiisa nimco waxay ka soo baxaan dabeecad wanaagsan, deeqsinimo leh. Isagu ma joojiyo inuu si xor ah noogu oggolaado ka qaybqaadashadiisa wanaagsanaan, xitaa haddii uu la kulmo iska caabin, caasinimo iyo caasinimo qayb ka mid ah abuurkiisa. Wuxuu ku falceliyaa dembiga annaga oo ah cafis iyo dib-u-heshiisiin bilaash ah, oo innaga ina siiyey innaga aawadood kafaaraggudka wiilkiisa. Ilaaha nuurka ah oo aan mugdi lahayn oo gudcurka isku siiya Isaga qudhiisa ayaa ina siiya Wiilkiisa Ruuxa Quduuska ah, in nolosha lanoo siiyo buuxnaantiisa. (1 Yooxanaa 1,5; Yooxanaa 10,10).
Ilaah miyuu weligiisba ahaa mid nimco leh?
Nasiib darrose, waxaa badanaa lagu doodi jiray in Ilaah markii hore ahaa (xitaa ka hor dayrta) wuxuu ballan qaaday wanaaggiisa (Aadan iyo Xaawa iyo Israa’iil dambe) kaliya haddii abuurkiisa uu buuxiyo shuruudo cayiman oo uu fuliyo waajibaadka ku saaran iyada. Hadduusan u ekaan karayn taas, isna isna ugama roonaanin iyada. Sidaa darteed ma uusan siinaynin iyada cafis iyo nolol weligeed ah.
Marka loo eego aragtidan qaldan, Eebbe wuxuu heshiis kula jiraa abuuristiisa "haddii ... markaa ...". Qandaraaskaas waxaa ku jira shuruudo ama waajibaad (Xeerar ama sharciyo) in aadamigu waajib ku yahay inuu u hoggaansamo inuu helo waxa Eebbe u soo jeediyo. Marka loo eego aragtidan, mudnaanta koowaad ee Ilaaha Qaadirka ah waa inaan u hoggaansanno qawaaniinta uu dejiyey. Hadaananu cadaalad samayn, isagu wuxuu hakin doonaa waxa ugu fiican. Xitaa ka sii darani, waxay na siin doontaa waxa aan fiicnayn, waxa aan noo horseedda nolosha laakiin dhimashada; hadda iyo weligiisba.
Aragtidan qaldan ayaa u aragta sharciga inuu yahay sifada ugu muhiimsan ee dabeecadda Eebbe iyo sidoo kale waa tan ugu muhiimsan ee xiriirka ka dhexeeya abuurkiisa. Ilaahkani asal ahaan waa ilaah qandaraas oo ku jira xiriir ku saleysan shuruuc iyo shuruudo abuurkiisa. Isagu wuxuu u hogaamiyaa xiriirkan iyadoo loo eegayo mabaadii '' sayid iyo addo '' Aragtidan, deeqsinimada Eebbe marka loo eego wanaaggiisa iyo barakadiisa, oo ay kujirto cafiska, way ka fog tahay suuradda aragtida Ilaah ee ay faafinayso.
Asal ahaan, Ilaah uma istaago rabitaan daahir ah ama sharci daahir ah. Tani waxay si gaar ah u caddahay markaan eegno Ciise, kan ina tusaya Aabbaha oo soo dira Ruuxa Quduuska ah. Tani waxay cadaatay markaan ka maqalno Ciise cilaaqa weligiis ah ee uu la leeyahay Aabbihiis iyo Ruuxa Quduuska ah. Wuxuu na soo ogeysiinayaa in dabeecadiisa iyo dabeecadiisu ay la mid yihiin kan aabaha. Xiriirka aabaha iyo wiilka ma ahan mid qaabeeya qawaaniin, waajibaad ama buuxinta shuruudaha si loo helo kaalmadan sidan. Aabaha iyo wiilku xiriir sharci ah ma wada lahaan karaan. Midkoodna ma aysan dhammaystirin heshiiska midba midka kale, taas oo ay ku dheehan tahay in u hoggaansanaan la'aanta hal dhinac ay si siman u xaq u leedahay wax-qabad la'aan. Fikradda ah heshiis qandaraas, xiriirka ku saleysan sharciga ee u dhexeeya aabaha iyo wiilka waa wax aan macquul aheyn. Runta, sida Ciise inoo sheegay, waxay tahay in xiriirkooda lagu garto jacayl quduus ah, daacadnimo, is-dhiibid, iyo isbarbardhig labada dhinac ah. Tukashadii Ciisi, sidaan u aqrinayno cutubka 17 ee Injiilka Yooxanaa, wuxuu cadeeyay in xiriirkan saddex geesoodka ahi uu aasaaska u yahay ficillada Ilaah ee cilaaqaad walba; maxaa yeelay, isagu had iyo goor wuxuu u sameeyaa siduu isagu isu nafsaddiisa u leeyahay, nafsaddiisa run buu u yahay.
Marka si taxaddar leh loo barto Qorniinka, waxaa caddaatay in cilaaqaadka Ilaah ee abuurkiisa, xitaa ka dib dhicitaankii Israa'iil, uusan ahayn mid qandaraas ah: laguma dhisin shuruudaha la buuxin doono. Waa muhiim in laga warqabo in cilaaqaadka uu Ilaah la sameeyay Israel uusan ahayn mid aasaasi ah oo sharci ahaan ku saleysan, oo uusan ahayn heshiis markaa ka dib. Bawlos sidoo kale wuu ka warqabay tan. Xiriirka Qaadirka ah ee reer binu Israa'iil wuxuu ku bilaabmay axdi, ballanqaad. Sharciga Muuse (Tawreed) wuxuu dhaqan galay 430 sano ka dib soo-saarkii dowladda federaalka. Iyadoo la tixraacayo jadwalka waqtiga, maaddaama sharcigu saldhig u ahaa xiriirka Ilaah iyo reer binu Israa'iil.
Iyadoo qayb ka ah axdiga, Ilaah wuxuu si xor ah reer binu Israa'iil oo dhan ugu qirtay wanaaggiisa oo dhan. Oo, sidaad xasuusato, tanina kuma xirna wixii ay reer binu Israa'iil lafteeda ku bixin lahayd Ilaah (Baxniintii Mox 5: 7,6-8). Yaanan ilaawin in Ibraahim uusan Ilaah ogeyn markuu u ballanqaaday inuu ducayn doono oo uu u barakadeeyo quruumaha oo dhan (Bilowgii 1: 12,2-3). Axdi waa ballan: si xor ah ayaa loo doortay oo loo oggolaaday. Rabbiga ciidammadu wuxuu reer binu Israa'iil ku yidhi, Anigu waan kuu kaxayn doonaa dadkayga, oo Ilaah baan noqon doonaa (Sharciga Kunoqoshadiisa 2). Dhaarta Ilaah ee barakada leh waxay ahayd hal-dhinac, wuxuu ka yimid dhinaciisa kaligiis. Wuxuu galay axdiga sidii muujinta dabeecadiisa, dabeecaddiisa iyo dabeecadiisa. Xidhitaankiisii ​​reer binu Israa'iil wuxuu ahaa ficil nimcaysan - haa, nimco!
Si dhow u eeg cutubyada ugu horreeya ee Bilowgii waxay muujinayaan in Ilaah uusan ku khaldnayn abuurkiisa iyada oo loo eegayo nooc heshiis heshiis ah. Ugu horreyntii, abuurista lafteedu waxay ahayd ficil tabaruc ah. Ma jirin wax kasbaday xaquuqda jiritaanka, kana yar jiritaanka wanaagsan. Ilaah laftiisu wuxuu sharraxayaa: «Oo waxay fiicnayd», haa, «aad u wanaagsan». Ilaahay wuxuu u oggolaanayaa wanaagiisa inuu si xor ah uga faa iideysto abuurkiisa, oo aad uga hooseeya isaga; nolosheeda ayuu siiyaa. Xaawa waxay ahayd hadiyadda Ilaah ee naxariis ee Aadan si uusan keligiis keligiis u noqon. Sidoo kale, Qaadirku wuxuu siiyey Aadan iyo Xaawa Beerta Ceeden waxayna ka dhigeen hawl faa'iido leh inay ku daryeelaan si ay u noqdeen mid wax tar leh oo nolosha daadanaya. Aadan iyo Xaawo ma aysan la kulmin wax shuruudo ah ka hor inteysan hadiyad ahaan u siinin Ilaah hadiyadan.
Laakiin muxuu ahaa markay dhacday deyntii markay xanaaqday kadib? Waxaa soo baxday in Ilaah uu sii wado ku-dhaqanka si iskaa ah iyo shuruud la'aan. Codsigiisii ​​ahaa in la siiyo Aadan iyo Xaawo suurtagalnimada toobad ka dib caasinimadooda ma waxay ahayd ficil nimco? Sidoo kale tixgeli sida Eebbe ugu siiyay dhogorta dharka. Xitaa ka eryitaankeedii Jannadii Ceeden waxay ahayd ficil nimcadeed oo ahayd inay ka celiso adeegsiga geedka nolosha dembigeeda. Ilaalintiisa iyo ilaalintiisa Qaabiil waxaa kaliya lagu arki karaa isla iftiinka. Waxaan sidoo kale aragnaa nimcada Ilaah ee ilaalinta uu siiyay Nuux iyo qoyskiisa, iyo dammaanadda qaab qaansoroobaad. Dhammaan falalkaan nimcooyinka ah waxaa si iskood ah loogu deeqay hadiyado muujinaya wanaagga Eebbe. Midkoodna mushahar uma aha sidii loo fulin lahaa, nooc kasta ha ahaato, xitaa ha yaraadee, waajibaad qandaraas oo sharci ahaan waajib ku ah.
Nimco sida naxariisla'aan ah?
Ilaahay had iyo jeer wuxuu u oggolaanayaa abuurkiisa inay si xor ah ugu wadaagaan wanaaggiisa. Wuxuu tan ku sameeyaa weligiis ka dhex ahaanshaheeda ugu hooseeya sidii Aabe, Wiil iyo Ruuxa Quduuska ah. Wax kasta oo Saddexdan u muuqda abuur abuurka wuxuu ka yimaadaa badnaanta bulshada gudaha. Xiriir sharci iyo qandaraas qandaraas ah oo lala yeesho Ilaah ma xurmeyn doono seddexlaha abuuraha iyo abuuritaanka axdiga, laakiin waxay ka dhigi doontaa sanam saafi ah. Sanamyadu waxay had iyo jeer la galaan cilaaqaad qandaraas lala yeesho kuwa ka dhergo gaajada ay u qabaan ictiraafka sababta oo ah waxay u baahan yihiin kuwa raacsan intii ay u baahan yihiin. Labaduba waa isku xidhan yihiin. Taasi waa sababta ay midba midka kale uga faa'iideystaan ​​himilooyinkooda is-u shaqeynta. Hadhuudhka runta ee lagu dhex jiro ee sheegaya in nimcadu tahay nimcadda Ilaah ee ay mudan tahay waa midda aan istaahilin.
Wanaagga Eebbe wuxuu ka adkaadaa shar
Nimcadu ma timaado kaliya xagga dembiga marka laga reebo sharciga ama waajibaadka saaran. Ilaahay waa nimco badaneyahay iyadoo aan loo eegayn nooca dhabta ah ee dembiga. Si kale haddii loo dhigo, dembi-muujinta loogama baahna in lagu muujiyo nimco. Saas ma aha, nimcadiisa way sii soconaysaa xitaa marka uu jiro dembi. Sidaa darteed waa run in Eebbe joojin maayo inuu si xor ah u siiyo wanaaggiisa abuurkiisa, xitaa haddii uusan u qalmin. Kadib wuxuu si mutadawacnimo ah u cafiyaa sicirka allabarikiisa dib-u-heshiisiinta.
Xitaa haddii aan dembaabno, Ilaah waa aamin sababtoo ah isagu isma dafiri karo, sida Bawlos leeyahay: "[...] waxaan nahay aamin la'aan, laakiin isagu waa aamin" (2 Timoteyos 2,13). Maaddaama Ilaah had iyo goor daacad u ahaado naftiisa, wuxuu haddana na tusayaa jacaylkiisa wuxuuna ku sii hayaa qorshihiisa quduuska ah ee annaga xitaa haddii aan ka soo horjeedno. Adkaysiga nimcada ee nala siiyay waxay muujineysaa sida ay muhiimka u tahay wanaagga abuurista Eebbe. "Masiixu wuxuu dhintay markii aan wali u jilicsan nahay caasiyiinteenii ... Ilaah wuxuu ina tusayaa jacaylkiisa uu inoo qabo xaqiiqda ah in Masiixu innaga u dhintay markii aan weli dembilayaal ahayn" (Rooma 5,6). Dabeecadda gaarka ah ee nimcadu waa loo wada dareemi karaa si aad u cad-cad halka ay ka iftiimiso mugdiga. Hadana sidaas ayaan uga hadleynaa nimcada inta badan macnaha guud ee dembiga.
Ilaahay waa nimco badaneyahay iyadoo aan loo eegin dambigeenna. Wuxuu caddeeyaa inuu aamin u yahay abuurkiisa wuxuuna ku sii hayaa aayatiinkeeda halista ah iyada. Waxaan si buuxda uga aqoonsan karnaa tan Ciise, kaasoo dhammaystiray kafaaraggudkiisii, oo aan laga tirtiri doonin wax kasta oo shar ah oo ka soo horjeedda. Awoodaha sharku kama hor joogsan karaan inuu naftiisa noo siiyo si aan u noolaano. Xanuun, silic, iyo dullinimo daran midna kama horjoogsan karo inuu raaco aayadiisa quduuska ah, ee ku saleysan jacaylka iyo inuu dadka Ilaah la heshiiyo. Wanaagga Eebbe uma baahna in xumaanta loo rogo wanaag. Laakiin markay xumaato, wanaaggu wuu ogyahay waxa loo baahan yahay in la qabto: waxaa muhiim ah in laga adkaado, lagu guuleysto oo lagu guuleysto. Marka naxariis badani ma jirto.
Nimco: sharci iyo adeecid?
Sideen u aragnaa sharciga Axdiga Hore iyo adeecitaanka Masiixiyiinta ee Axdiga Cusub ee ku saabsan nimcada? Haddii aan xasuusano in axdiga Ilaah uu yahay ballan hal dhinac ah, jawaabtu waa mid iskaa wax u sharrax ah. Sikastaba, haynta ballan qaadku kuma xirna jawaab celintan. Laba arimood ayaa ku jira xidhiidhkan: in lagu rumeeysto balan qaad buuxa ee aaminaada Eebbe iyo in kale. Sharciga Muuse (Tawreed) waxay u caddeysay reer binu Israa'iil micnaha ay u leedahay inay axdiga Ilaah ku jirto tan ka hor dhammaystirka ugu dambeeya ee ballanqaadkiisii ​​uu sameeyey (taasi waa, ka hor muuqashada Ciise Masiix). Ammaantiisa aawadeed, Ilaaha Qaadirka ah reer binu Israa'iil wuxuu shaaca ka qaaday jidkii nolosha dhexdeeda axdigiisa (axdigii hore) waa inuu hoggaamiyo.
Tawreedka waxaa Ilaah u keenay reer binu Israa'iil hadiyad ahaan raalli ka ah. Waa inaad caawisaa iyaga. Bawlos wuxuu ugu yeedhay "aqoonyahan" (Galatiya 3,24: 25; Kitaabka Quduuska ah). Marka waa in loo arkaa hadiyad wanaagsan oo nimcaysan oo ka timid Israa'iil Qaadirka ah. Sharciga ayaa loo meel mariyay qayb ka mid ah axdigii hore, kaas oo ku jira wejigiisii ​​ballan qaadkiisa (sugaya in la dhammaystiro qaab Masiixa ku jira Axdiga Cusub) wuxuu ahaa axdiga nimcada. Waxay u adeegi doontaa axdiga doonista Ilaah ee barakada reer binu Israa'iil oo ka dhigaya hormuud nimco oo dadyowga oo dhan.
Ilaaha runta isaga laftiisa ayaa raba inuu la yeesho xiriir aan heshiis la laheyn dadka ku jira Axdiga Cusub oo lagu fuliyay Ciise Masiix. Isagu wuxuu ina wada siiyaa barakooyinka kafaaraggudka iyo noloshiisa oo dhan, dhimashadiisa, sarakiciddiisa iyo ubaxnimadiisa. Waxaa naloo soo bandhigay dhammaan faa'iidooyinka dowladdiisa mustaqbalka. Waxaan sidoo kale nasiib u helnay in Ruuxa Quduuska ahi inagu dhex jiro. Laakiin hadiyadan hadiyadaha nimcada ee Axdiga Cusub waxay weyddiistaa jawaab celin - waa falcelintii ay ahayd in Israa'iil muujiso: iimaanka (Aamin). Laakiin sida ku xusan axdiga cusub, waxaan aaminsanahay fulintiisa halkii aan ka ahayn ballantoodii.
Falcelinteena ku aaddan wanaagga Eebbe?
Maxay noqon doontaa ficilkeenna nimcada na tusaysa? Jawaabtu waa: "Nolol kalsooni ku qabta ballanta". Taasi waa waxa loola jeedo “nolosha iimaanka”. Waxaan ka helnaa tusaalayaal qaab nololeed noocan ah "Quduusiin" ee Axdiga Hore (Cibraaniyada 11). Waxaa jira cawaaqib xumo hadii qofku uusan ku noolaan kalsoonida axdiga ama ballanta. Kalsoonida lagu qabo Confederation iyo qoraaga ayaa hoos u dhigay faa'iidadiisa. Kalsoonida ay Israa’iil ku hayso ayaa ka xayuubisay halka ay ka timaado nolosha - cuntadeeda, wanaaggeeda iyo bacrinta. Xaqdarradu waxay ku taagnaayeen xiriirkii uu la lahaa Ilaah illaa iyo in loo diidey inuu ka qayb qaato hadiyado badan oo Ilaaha Qaadirka ah.
Axdigii Ilaah, sida Bawlos uu noo sharxayo, lama beddeli karo. Sabab? Sababta oo ah Ilaaha Qaadirka ah ayaa si aamin ah u haysta oo sii haynaya, xitaa haddii ay ku kacdo kharash. Ilaah waligiis kama dhaqaaqi doono eraygiisa; laguma qasbi karo inuu si aan habooneyn ugu dhaqmo abuurkiisa ama dadkiisa. Xitaa iyada oo aan aamminsanayn ballanka, ma yeeli karno isaga inuu naftiisa aamin u noqdo. Tani waa waxa loola jeedo marka la dhaho in Ilaah u dhaqmo "magiciisa aawadiis".
Iimaanka xagga Ilaah, dhammaan tilmaamaha iyo amarada ku xidhan isaga waa inay adeecaan anaga addeecidda naxariis iyo nimcadda xorta ah ee la ina siiyay. Nimcadaas ayaa lagu fuliyay cibaadada iyo muujinta Ilaah qudhiisa ee Ciise. Si loo helo raalli ahaanshahooda, qofku waa inuu aqbalaa hadiyadaha Ilaaha Qaadirka ah, mana diido midna mana diido. Tilmaamaha (Amarada) aan ka helnay Axdiga Cusub dhexdiisa micnaha ay u leedahay dadka Ilaah ka dib Mu'asasada Axdiga Cusub inay helaan oo ay aaminaan nimcada Ilaah.
Waa maxay xididdada addeecidda?
Marka halkeen ka heli karnaa isha addeecidda? Waxay ka timid kalsoonida ilaahay aaminka ilaa himilooyinka axdigiisa, sida lagu xaqiijiyey Ciise Masiix. Qaabka kaliya ee adeecida ee Ilaah u go'ay waa addeecid, oo nafsaddaada ka muujisa iimaanka jiritaanka Ilaaha Qaadirka ah, aaminnimada erayga, iyo aaminnimada naftaada (Rooma 1,5; 16,26). Addeeciddu waa jawaabteenna nimcadiisa. Bawlos shaki kuma hayo arrintan - tani waxay si gaar ah uga caddahay bayaankiisa in reer binu Israa'iil ay ku guuldaraysteen inay u hoggaansamaan shuruudaha sharciga ah ee Tawreed, laakiin ay tahay sababta oo ah waxay "diideen waddadii rumaysadka waxayna rumaysteen in adeecitaankooda ay tahay in la gaaro keen » (Rooma 9,32; Good News Bible). Rasuul Bawlos, oo ahaa Farrisi sharci-yaqaan ah, wuxuu aqoonsaday runta cajiibka ah ee ah in Ilaah uusan weligiis dooneynin inuu xaq ku noqdo sharciga. Marka loo eego xaqnimada uu Eebbe raalli ka yahay inuu ku siiyo nimco, marka la barbar dhigo ka qaybqaadashadiisa xaqnimada Ilaah ee uu Masiixu isaga siinayo, waxay noqon lahayd (in la yidhaa ugu yaraan!) sidii wasakh aan qiimo lahayn (Filiboy 3,8-9).
Had iyo goor waxay ahayd doonista Ilaah inuu dadkiisa la qaybsado xaqnimadiisa hadiyad ahaan. Sabab? Sababta oo ah wuu naxariis badan yahay (Filiboy 3,8-9). Marka sidee baan ku helnaa hadiyaddan aan si xor ah u dooranay? Iyada oo Ilaah aaminay arrintan oo aan aaminsanaano ballanqaadkiisa in naloo siin doono. Addeecda ee Ilaah inaga doonayo inaan aragno waxaa ku quudiya iimaan, rajo iyo jacayl isaga loo qabo. Wicitaanada ku saabsan ku celcelinta adeecida aan la kulano dhammaan Qorniinka oo dhan, iyo sidoo kale amarradii aan ka dhex helno Axdiyada Hore iyo Axdiga Cusub, waxay ka yimaadeen nimco. Haddii aan aaminsanaano ballanqaadyada Ilaah oo aan aaminsanahay inay ku rumoobi doonaan Masiixa ka dibna annagaba, waxaan dooneynaa inaan ugu noolaano iyaga si waafaqsan iyaga dhab ahaan run iyo run ah. Nolosha caasinimada kuma salaysna kalsoonida ama waa la xannibi karaa ka soo horjeedda (wali) aqbalaadda wixii loo ballanqaaday. Kaliya addeecid ka timaada iimaanka, rajada iyo jacaylka ayaa Ilaah ammaanaya; maxaa yeelay, qaabkan addeecid keliya ayaa marag u ah kan Ilaah runtii yahay, siduu inoogu muujiyey xagga Ciise Masiix.
Ilaaha Qaadirka ah wuxuu sii wadaa inuu nimco noogu sameeyo haddii aan aqbalno nimcadiisa ama aan diidno. Wanaaggiisa ayaa qayb ahaan ka tarjumeysa xaqiiqada ah inuusan ka jawaab celineynin caabbigeenna nimcadiisa. Tani waa sida cadhada Ilaah loogu muujiyo isagoo ka soo horjeedda "maya" isaga si loo adkeeyo "haa" ee nala siiyay qaab Masiixa (2 Korintos 1,19). Oo Ilaaha Qaadirka ah "Maya" wuxuu u xoog badan yahay sida “Haa” waayo waa muujinta eraygiisa "Jas".
Wax ka reeban naxariis mooyee!
Waa muhiim in la garto in Eebbe ka reebaynin ujeedooyinkiisa sare iyo amarradiisa quduuska ah ee dadkiisa. Daacadnimadiisa darteed, isagu isma dhiibi doono. Saas ma aha, wuxuu nagu jecel yahay si kaamil ah - oo kaamil ah wiilkiisa. Ilaah wuxuu doonayaa inuu na sharfo si aan isaga ugu aaminno waxkasta oo aan isku kalsoon nahay oo aan jeclaano isaga taasna waxay sidoo kale u ifinaysaa si kaamil ah habkeenna nololeed ee uu nimcadiisa wataan. Tan ayaa qalbiyadeenna cajiibka ah dib u helaysa kursigeenna nolosheena ayaa muujineysa aaminaada aan Ilaah ku qabno, oo si xor ah loo siiyay wanaagga qaabka ugu fiican. Jacaylkiisa kaamilka ah, ayaa isna, na siin doona jacayl kaamil ah innaga oo innagana na siinaya macne buuxda iyo ugu dambayntii ammaanta. "Kii ku bilaabay shaqada wanaagsan ee kugu dhex jira ayaa dhammayn doona ilaa maalinta Ciise Masiix" (Filiboy 1,6).
Ilaah miyuu noo naxariisan doonaa, oo dhamaadka ugudambaysta ha inaga tago? Ka waran haddii ay jiraan waxyaabo ka reeban xukunka jannada - markii iimaan la'aan ka jirto, jaceyl la’aan, halkaan ka go'naan yar iyo xanaaq yar iyo xanaaq, halkaan, xanaaq yar iyo kalsooni yar ayaa jirta inaysan jirin? Xaalad noocee ah ayaan lahaan lahayn markaas? Hagaag, mid u eg arrintaas gudaha iyo hadda, laakiin weligiis sii jiri doona! Ilaah runtii naxariis iyo naxariis miyaa heli lahaa haddii uu inaga tago “xaalad degdeg ah” weligiis? Maya! Ugu dambeyntiina, nimcada Ilaah uma oggolaato wax ka reeban - oo aan loo eegin nimcadiisa weyn ee lafteeda, ama iyada oo aan loo eegin xukunka jacaylkiisa rabaani ah iyo rabitaankiisa wanaagsan; haddii kalese nimco ma ahaan doono.
Maxaan samayn karnaa si looga hortago kuwa ku xadgudba nimcada Ilaah?
Marka la barayo dadka inay raacaan Ciise, waa inaan barinnaa inay fahmaan oo ay helaan nimcada Eebbe halkii aan qalad iyo faan ka soo horjeedno. Waa inaan ka caawinno inay ku noolaadaan nimcada uu Ilaahay iyaga ku keenay halkan iyo hadda. Waa inaan ka dhigno inay ogaadaan in wixii ay qabtaan, Ilaaha Qaadirka ahu naftiisa iyo ujeedkooda u rumoobi doono. Waa inaan ku xoojinno aqoonta ah in Eebbe, oo ka fikiraya jacaylkiisa iyaga, naxariistiisa, dabeecadiisa, iyo ujeeddadiisa is-go'aansatay, ay noqon doonaan kuwa aan loo dulqaadan doonin ka hor tagga nimcadiisa. Sidaas darteed, maalin maalmaha ka mid ah ayaan dhammaanteen la wadaagi doonnaa nimco buuxda oo aan ku noolaan doonnaa nolol naxariis. Sidan, waxaan si farxad leh u qaadan doonnaa "waajibaadka" la xiriira tan - si buuxda ayaan uga warqabnaa mudnaanta u leedahay inaan ilmo Ilaah ku nahay Ciise Masiix, walaalkeen weyn.